के तपाईँ स्वस्थ जीवन जिउन चाहनुहुन्छ ? यदि चाहनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी तरिकाहरू ! « Salleri Khabar
के तपाईँ स्वस्थ जीवन जिउन चाहनुहुन्छ ? यदि चाहनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी तरिकाहरू !
१) स्वस्थ खानपान:
हाम्रो शरीर चलाउने इन्धन भनेकै स्वच्छ खाना हो । जसरी कुनै मसिन चलाउन इन्धनको आवसक पर्छ त्यसरीनै हाम्रो शरीरलाई काम गर्न को लागि ऊर्जा चाहिन्छ जस्को भर्पाइ हामीले खाएको खानाबाट हुन्छ । हामीले ताजा र सफा खानाको सेवन गर्‍यौ भने हाम्रो शरीर लाई चहिने मात्रामा पोशन मिल्छ र हाम्रो शरीरका सबै प्रणालीले सहजरुपमा काम गर्न सक्छन् । खानका लागि हरियो सागसब्जी , ताजा फलफुल , दूध , मह आदी अपयुक्त मानिन्छन । स्वस्थ खाननै स्वस्थ जीवनको रहस्य हो ।
२) पानीको सेवन:
पानीले एक स्नेहकको रूपमा सेवा गर्दैछ। पानीले शरीर को तापमान स्थिर राख्नमा मद्घत गर्छ । सबै सेल र अङ्गले शरीर विज्ञान बनाउनका लागि पानीमा भर पर्छन्।पानी आँफैमा चिसो पदार्थ हो । यस्ले तनाव बाट टाढा रक्छ । नियमित पानी पिउने मनिस शान्त स्वभावको हुन्छ । खाली पेट १ ग्लास पानी पिउनाले मेटाबॉलिज्म २४ प्रतिशत बद्छ । यस्ले मोटोपना घटाउन पनि मद्घत गर्छ । पानी पिउनाले यूरि‍न इंफेक्शन एवं अन्य पिसाब संबंधी समस्याबाट बाचाउछ । पानी पीनाले कोशिकाओंलाई ऑक्सीजन मिल्छ र उनीहरू सक्रिय रहन्छन, जसले गर्द छालामा ताजगी बनिरहन्छ । पानीले रक्तमा हानिकारक तत्वोलाई घुलन दिदैन र शुद्धि‍करणमा सहायता गर्छ जसले गर्द नयाँ कोशि‍काओं र मांसपेशि‍यों को बन्ने प्रक्रिया बद्छ।
३) पुरा निद्रा :
प्रायप्त निद्र जिबनसैलेको आधार हो । कम्तीमा पनि ७ देखी ८ घण्टा को निद्रा हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ । यती मात्रा म सुत्नाले मूड फ्रेश हुन्छ र आँखा वरिपरि कालो दाग पनि बस्दैन । सुतेको बेला कोशिकाओंमा रिपेरिङ्गको कार्य हुन्छ जसले गर्द हाम्रो मन र मस्तिस्क प्रफुल्लित हुन्छ र हामीलाई तनब हुँदैन । प्रयाप्त निद्राले हाम्रो मेमोरी पावरलैइ पनि बदाउन मद्घत गर्छ । प्रयप्त निद्रा ले इम्मयुन सिसटमलाई बलियो बनाउछ अनि रोग देखी टाढा राक्छ ।
योग प्राचीन संस्कृति को गोरवमयी हिस्सा हो | योग एक यस्तो सुलव एवं प्राकृतिक पद्धति हो स्वस्थ जसले मन एवं शरीरक लागि आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।योग को प्रयोग शारीरिक , मानसिक र आध्यत्मिक लाभको लागि हो l योगाभ्यासले रोगसँग लड़ने शक्ति बढाउछ | बुढेस्कालमा पनि जवान महसुस गराउछ र छालामा चमक लाउछ अनि शरीरलाई स्वस्थ,निरोगी र बलवान बनाउछ |योगले ब्लड शुगर लेवल घटाउछ र आनावस्यक कोलेस्ट्रोललाई घटाऊछ ।डायबिटीज रोगको लागि पनि योग निकै फाईदाजनक छ।
५) धूम्रपान बाट टाढा:
यस्ले क्यान्सर रोग लाई निम्त्याउछ । यस्ले मनिसको आयु पनि घटाऊछ। धुम्रपानले मुखको स्वाद बिगारने , पेटलाई रोगी बनाउने, निद्रा नलाग्ने , सास गनाउने, आँखाको शक्ती घटाउने, नङ र दात पहेलो गराउने गर्छ । त्यसैले धुम्रपान र अरु कुनै लगु पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन ।
बच्चा र युवामा लकडाउनको मानसिक असर लामो समयसम्म रहन सक्ने
रिपोर्ट अनुसार युवामा डिप्रेशनको खतरा पहिलेको तुलनामा तीन गुणा बढेको छ ।
गहिरो निद्राको लागि सकारात्मक सोच र सरल जीवनशैली किन आवश्यक ?
सावधान ! दुध चिया पिउने बानीले आउन सक्छ स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या